PTZOptics naputara ohuru Joystick njikwa | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Mgbasa Injinia Mgbasa Ozi
Home » Apụta » PTZOptics weputara Joystick Controller ohuru
Downingtown, PA - Febụwarị 17, 2021 - PTZOptics, na-eduga emeputa nke oké ọnụ na agbasa ozi n'ikuku-edu robotic ese, mara ọkwa ntọhapụ nke PT-SuperJoy-G1 Joystick njikwa, a keukwu ngwọta na-akwado Oghere Usoro na netwọk dabeere na igwefoto. SuperJoy na-etinye njikwa njikwa multicamera ọkaibe na mkpịsị aka nke ndị ọrụ nke ọkwa ike ọ bụla. Ndị ọrụ ga-enwe njikwa zuru oke na njikwa PTZOptics ma ọ bụ igwefoto HuddleCamHD ọ bụla, yana njikwa nke Sony, Nnụnụ, Newtek, na igwefoto PTZ ndị ọzọ maka ntọala ntọala.
"Enweghị ihe eji eme ihe ọjọọ maka SuperJoy," ka Matt Davis, Onye isi injinia na PTZOptics na-ekwu. “Anyị mere ọ thisụ a iji 'kpọọ ọmarịcha' ya na ndị ọrụ dị ugbu a. Anyị na-anwa ime ka ọ bụrụ ụwa niile, iji ọtụtụ ngwaọrụ rụọ ọrụ. N'agbanyeghị ntinye gị, nke a kwesịrị ikwekọ n'ọnọdụ ahụ. ”
Ntinye bọtịnụ Push na Ndozi On-The
SuperJoy nwere ike ịhazi ya na ihe ruru 255 PTZ igwefoto, gụnyere 9 "ngwa ngwa atọrọ." Ndị ọrụ nwekwara ike ịmepụta ihe dị iche iche na-achịkwa igwefoto anọ na-enye ha ohere ịgbanwe ọnọdụ dị mfe. Enwere ike ịhazi bọtịnụ ahaziri anọ nke SuperJoy iji kpalite “super presets” nke ruru gafere igwefoto, na-ezipụ iwu iwu site na HTTP, UART, TCP ma ọ bụ UDP na akụrụngwa dabere na ntanetị gụnyere ọkụ, igwe okwu, na ngosipụta. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ SuperJoy kpatara ngwaọrụ ọ bụla nwere ike ịchịkwa IP.
SuperJoy na-enye njikwa nke ọma karịa ọnọdụ igwefoto na mbugharị. N'iji bọtịnụ mgbakwunye, onye ọrụ nwere ike ịhazigharị pan, tugharị, mbugharị, na nhazi ọsọ. SuperJoy nwekwara ọkpụkpọ iji mee mgbanwe nkeji iji mee ka mbugharị, ilekwasị anya, ntọala iris / shutter, yana uru ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ. A na-edozi ikike a iji dọọ ụda dị mma site n'ikike ịtọba ihe njikwa dị. Ejiri "ọnọdụ dị nkenke" rụọ ọrụ na-egbochi njikwa kachasị karịa njikwa naanị ọ cameraụ igwefoto na ntọala, ebe "ọnọdụ matrik" na-enye onye ọrụ ikike ịkpọ ihe atọrọ maka igwefoto atọ. Agbanyeghị ọnọdụ, SuperJoy na-agbanye bọtịnụ dịnụ maka onye ọrụ. Basic na matriks ụdịdị na-enye ndị ọrụ afọ ofufo na ndị ọrụ novice ohere isonye na mmepụta vidiyo n'atụghị ụjọ ịmehie ihe.
Vasatail, Ike, Enweta
Ugbu a iji nye iwu maka $ 989 US MSRP, e mere SuperJoy iji lelee ọtụtụ ngwa, nha mmepụta na usoro nka. Site na nhazi ya dị iche iche na ike ịmegharị ya nke ọma, ihe ngwọta a nwere ike iweta ọbụna usoro ọtụtụ multicamera dị mgbagwoju anya. SuperJoy gụnyere akwụkwọ ikike afọ abụọ dị obere ma dị ugbu a maka ịnye iwu. Maka nkọwa ngwaahịa na ozi ndị ọzọ, gaa na ptzoptics.com/superjoy/.
PTZOptics bụ onye nrụpụta pan, pịrịzigharị, mbugharị igwefoto maka ngwa mgbasa ozi dịgasị iche iche, gụnyere imepụta vidiyo na nkwanye ndụ. N'ịbụ onye guzosiri ike na 2014, PTZOptics mebiri ụlọ ọrụ ọdịyo ọkachamara mgbe otu ndị injinia sitere na ụlọ ọrụ sistemụ a na-akwanyere ùgwù nke ukwuu mepụtara nke mbụ na pọtụfoliyo nke igwefoto nke bụ akụkụ nke ọhụụ ha iji mepụta "mma agha ndị agha Switzerland" maka mkpa dị mgbagwoju anya nke Okirikiri ala. Onye isi ya na Downingtown, Pa., Mbido bidoro ngwa ngwa ụfọdụ n'ime ụdị ndị kachasị na ụdị igwefoto PTZ na-eto eto. Site na nkesa ụwa n'ihe karịrị mba 50, PTZOptics emepụtala ụlọ ọrụ na-eduga ihe onwunwe, gụnyere usoro StreamGeeks ndụ. PTZOptics Paul Richards edeela ọtụtụ akwụkwọ nyocha na isiokwu ọkụ ụlọ ọrụ, dịka "Helping your Church Live Stream" na "Esports in Education." Ndị otu ya na-ewepụta Live Qumit Summit kwa izu, nke na-eme ka ọtụtụ puku ndị isi ụka na ndị ọrụ afọ ofufo gafee ụwa. PTZOptics bụ ụlọ ọrụ nwanne nwanyị na HuddleCamHD, ndị na-emepụta igwefoto vidiyo vidiyo ọkachamara. Mụtakwuo na www.PTZOptics.com.
Onye isi iyi Streaming at PTZOptics
Paul Richards bụ Chief Streaming Officer maka PTZOptics. Richards bu onye nyere aka na Live Stream Live, Esports na Education, na Acrelerated Broadcast Club Curriculum, na akwukwo ndi ozo na - ebi ndu.
Peeji ohuru nke Paul Richards depụtara (-ahụ ihe niile)
PTZOptics weputara Joystick Controller ohuru - February 18, 2021
Jumpstart Live Live Streaming gị na StreamGeeks Summit - November 25, 2020
A napụtara Akwụkwọ Nduzi Live na Video Production iji nyere ndị na-amụ aka aka inweta Nkà Mmụta Ọkwa - October 2, 2020
Previous: Na-ewetara Australia Day ndụ dị anya
Osote: 2020 Fall Television na usoro gụgharia dabere na Blackmagic Design